musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Meal Kit Indasitiri Inokwira muMabhirioni
Muna 2020, vatengi vakawanda kupfuura nakare kose vaifunga kuodha makiti ekudya uye zvimwe zvekudya nezvinwiwa pamhepo kuti vadzivise kutenga magirosari muzvitoro zvakazara vanhu, kwavanogona kuoneswa hutachiona hweCOVID-19.
Kukura kwakaenderera mberi muna 2021 sezvo vatengi vaitarisa kumakiti ekudya uye e-commerce yegrocery seimwe nzira iri nyore kune yakajairwa kutenga grocery uye kuronga chikafu. Nemusi weMuvhuro, Kroger yakazivisa kuti chikafu chayo chekudya uye bhizinesi rekubika Chef rakapfuura bhiriyoni imwe mukutengesa kwepagore sezvo vatengi vakatsvaga mhinduro dzechikafu panguva yedenda.
Sekureva kwaPackaged Chokwadi muongorori Cara Rasch, idzi nhau nezveKumba Chef hazvishamise. “Semamwe makambani ekubika chikafu, Kumba Chef akawana budiriro yakasimba yekutengesa panguva yedenda sezvo vanhu vakapedza nguva yakawanda vari kumba vachitsvaga zvakasiyana panguva yekudya kwemanheru. Semumwe wevatungamiriri vemusika wekudya, Kumba Chef akashandisa maitiro evatengi ekubika uye kudya zvakanyanya kumba kuti vakwanise kuwedzera 118% yegore regore ra2020.
Packaged Facts 'Chikumi 2021 National Online Consumer Survey inoona kuti kune avo vanoshandisa masevhisi ekupa chikafu chekudya, zvikonzero zvepamusoro zvekuita izvi zviri nyore, kufarira kuva nekudya zvakarongerwa ivo, uye kuyedza chimwe chinhu chitsva / kushandura chikafu. Huwandu hukuru hwevashandisi vezvikafu zvehupfu hunotiwo vanoshandisa kitsi dzekudya nekuti zvigadzirwa izvi zvinovachengetera nguva pakugadzirira kwekudya.
Rasch anoti, "Meal kits inomiririra kukosha kwevatengi vanorwara nehurongwa hwekudya kana kutenga girosari vachiri kuda chikafu chakabikwa kumba, sezvo vachideredza nguva inopedzerwa kutsvaga mabikirwo nekutenga zvekubikisa."
Rasch anoenderera mberi achiti, “Kuneta kwedenda muna 2020 na2021 kwakonzera kuti vanhu vazhinji vatsvage sarudzo nyowani kuti vawane chikafu patafura. Meal kits inokwezva kune vatengi ava nekuti inoderedza nguva inopedzerwa mukuronga chikafu nekutenga girosari. Vanobvisawo kuraswa kwechikafu, sezvo chikafu chese chine zvakakamurwa zvakakwana zvakagadzirirwa imwe resipi. ”
Uyezve, Rasch anonongedza kuti makiti ekudya akabatsira vamwe vatengi kuvandudza hunyanzvi hwavo hwekubika panguva yedenda semadyiro achinja kumba. “Kune avo vasina hunyanzvi hwekubika, midziyo yekubikira yave kuponesa upenyu mukuvadzidzisa kubika nemabikirwo ari nyore, nhanho-nhanho sezvo vakawana zvakawanda zvinodiwa kana chido chekubikira kumba.
Zvakangodaro, masevhisi ekupa kit kit ari niche. Packaged Facts 'Chikumi 2021 National Online Consumer Survey inoona kuti 11% chete yevatengi vanotaura vachishandisa chikafu chekuendesa sevhisi mumwedzi gumi nemaviri yapfuura.